Ndị na-ahụ maka Intanet - Atiya Blog
Ulo oru di iche iche
Chọọchị Agba Ọhụrụ
Anyị bụ ndị na-enweghị akwụkwọ, anyị enweghịkwa isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ onyeisi oche. Isi nke ụka abụghị onye ọzọ ma ọ bụghị Jizọs Kraịst n'onwe ya (Ndị Efesọs 1: 22-23).
Ọgbakọ ọ bụla nke ụka dị iche iche nke Kraịst kwadoro, ọ bụkwa Okwu Chineke nke na-eme ka anyị baa n'otu Otu (Ndị Efesọs 4: 3-6). Anyị na-agbaso ozizi Jizọs Kraịst na ndịozi ya, ọ bụghị ozizi mmadụ. Anyị bụ Ndị Kraịst naanị!
Anyị na-ekwu ebe Bible na-ekwu okwu, anyị na-anọ jụụ ebe Bible na-agbachi nkịtị.
Ozi oma: Ihe ndi ozo maka ndi oru ntanetiri
Anyị agwụla niile upgrades anyị na netwọk ma na-adịbeghị anya webatara anyị website ọhụrụ. Ejiri usoro mgbasa ozi ọhụrụ a ka ọ baara ụka nke Kraịst uru na ndị niile na-achọ ụzọ dị mma nke Chineke. Ihe ọhụrụ anyị ga-agụnye ọtụtụ atụmatụ na nkwalite ndị ga-enyere ndị ụka Kraist aka n'ụwa nile.
Aghaghariri akwụkwọ anyị nke ụwa niile maka ụka dị icheiche nke Kraịst na-agụnye ngwa n'efu maka gam akporo Smart Smartphones na Iphones n'ụwa nile.
Anyị nwere obi ụtọ maka ọdịnihu maka ụka nke Kraịst na ntanetị. Ana m ekele maka ihe nile n'ime unu na-eme n'ubi vine nke Onyenwe anyi. Ịhụnanya gị na nkwado maka ozi anyị nwere ekele dị ukwuu.
Biko cheta anyị n'ekpere gị ka anyị na-arụ ọrụ iji mee ka ụka dị iche iche nke Kraịst dịkwuo mma n'ụwa nile. Chineke dị mma!